JINGYE Pressure Cooker dia be mpampiasa amin'ny fizotran'ny sakafo fonosina: toy ny sardine am-bifotsy, tuna, legioma, henan'omby; tavoahangy pickles, sakafo poche vacuum, siny voankazo sns,
5.Sterilizing type: rano mafana, famaohana rano mafana, karazana etona;
7.Ny trolley sy fitoeran-javatra ao anatiny, hitazona vokatra;
1. Fanaraha-maso ny mari-pana sy ny tsindry fanamafisana. Afaka mahafeno karazana fonosana takiana amin'ny fanaovana sterilisation (canine, vera, fonosana malefaka, tavoahangy PP, sns.), Izay tsy vitan'ny fanatsarana ny tahan'ny fampiasana fitaovana, fa koa hamonjy tsy ilaina ilaina fampiasam-bola;
2. Ny fizotran'ny sterilization iray manontolo dia mandray ny fifehezana mandeha ho azy PLC, ny mari-pana fizarana hafanana ao anaty vilany dia fehezina ao anaty na mihena 0,5 degre Celsius, mitahiry angovo; ampiarahina amin'ny asa fandrefesana sanda F; azo atao ny tehirizina ny formula 99 sterilization;
3. Ny fizotran'ny sterilization iray manontolo dia vita tanteraka mifanaraka amin'ny raikipohy efa napetraka mialoha, ary ny formula dia ampiarahina amin'ny teny miafina marobe hamongorana ny mety tsy fandehanan-draharaha.
4. Mampiasà fepetra fiarovana roa sosona mba hahatsapanao ny fifehezana ny mari-pana sy ny tsindry ho azy hanafoanana ireo loza mety hitranga.
MODELY Diameter (mm) Halavany (mm) hafanana
(℃) Fanerena fitsapana (Mpa) Design pression (Mpa)
Teo aloha: Pressure Cooker
Manaraka: Tono mifangaro